Sawirro:- Taallo lagu xasuusanayo Qaraxii 14-kii October ee Soobe ayaa la dhisay – XOGMAAL.COM
Sawirro:- Taallo lagu xasuusanayo Qaraxii 14-kii October ee Soobe ayaa la dhisay
Xasuuqii Soobe wa ficil aan la fileyn oo reebay naxdin iyo amakaag,kadib kolkii maalin qura ay dhibaatooyin isugu jiray dhimasho,dhaawacyo iyo burbur hanti ay soo gaartay dad ka badan 1890-ruux waana mid xasuus gaar ah ku leh qalbiyada dadka,isla markaana dhaxalsiisay dhibaatooyin xoog leh.
By Soomaaliya	 Last updated Oct 13, 2018
Dowladda Hoose ee Xamar ayaa taallo xasuus ah ka dhistay Isgoyska KM 5 oo ah goobtii uu ka dhacay Qaraxii dadka badan lagu xasuuqay ee Soobe.
Taalladan laga dhisay Isgooska Soobe ayaa ah mid lagu xasuusanayo Dadkii weerarkaasi musiibada ahaa lagu dilay 14-kii Octoober Sanadkii hore.
Kulan dhawaan ay Muqdisho ku yeesheen Golaha wasiirada kulankooda ayaa looga hadlay dhibaatadii xanuunka iyo muragada badnayd ee ka dhalatay weerarkii 14 October, waxaana lag go’aamiyay in xasuus qaran loo sameeyo dadkii waxyeelada ay soo gaartay.
Muqdisho waxaa ka socda qaban qaabada xuska muragada dhacdadaasi 14 Oktober sanadkii hore, Waxaa ka qeybgali doona xuskaasi mas’uuliyiin ka mid ah Dowladda , qaar ka tirsan qoysaska dhibanayaasha iyo dadka Caasimadda.
14 Oktober, 2017, gaari weyn oo xamuul ah oo lagu soo raray walxo qarxa oo tankoodu cuslaa oo uu kaxeynayay naftii halige ayaa lagu beegsaday Isgoyska Zope ee KM 5 ee Muqdisho, oo ah waddo ganacsi oo ciriiri badan, waxa ayna taasi sababtay geerida Shacab badan oo aan waxba galabsan, oo ay ku jireen dad wadada goynayay, dad ka xoogsanayay ganacsiga waratada, looska iyo cadayga ku iibinayay hab socod wareeg ah, dad suuq-tag iyo wax iibsi ku jiray, arday da’ yar, arday jaamacadeed, dad ka cuntaynayay maqaayado, marti deganayd hoteello iyo dad ku tukanayay seddex masjid.
Sawirro:- Maxkamada Ciidamada ayaa xukuntay Askar ka soo baxay aag dagaal
Wafdi ka socda Wasaarada difaaca Qatar ayaa soo gaaray Muqdisho.